downloads, တာရှည်!3နှစ်ပေါင်း4months ago #191
ငါသည်လက်ရှိတွင်မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးပေါ့တစ်ဦးဂျမ်ဘိုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ကိုယ့်အသိအမှတ်ပြုရတဲ့နှင့်အတူဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောပြဿနာများရှိခဲ့! ငါအော်ရီဂွန်မှာနေထိုင်ရှိရာအနီးတစ်ဦးလေဆိပ် load dn မှ2+ နာရီကြာပါတယ်။ ငါအရမ်းမြန်တဲ့ Wi-Fi ကို server ကိုရှိသည်! ကျေးဇူးပြုပြီးအကြံပေးပါ